Ama-Dental Veneers | Odokotela Bamazinyo Abangcono Kakhulu eKapa
Yeka ukufihla ukumamatheka kwakho okuhle.
Dental Veneers eKapa. Sisebenzisa ama-veneers ahlanganisiwe akhiwe ngomjovo lapho kungenzeka khona
Londoloza ukumamatheka kwakho kwemvelo futhi ugcine amazinyo akho enempilo futhi engenawo amagciwane abangela ukubola. I-Composite bonding veneers ayidingi ukubhola ezimweni eziningi. Momotheka ngokuzethemba nobungqabavu namuhla.
I-Dental Veneers Ibiza INingizimu Afrika
I-veneer igobolondo leceramic elincanyana elilingana phezu kwezinyo elonakele, elingapeki kahle, noma eliguqukile. Inqubo ibandakanya uhambo olubili lokuya kudokotela wakho wamazinyo wezimonyo cishe amasonto ayisithupha. Ohambweni lokuqala, uzolungiselelwa izinyo lakho lemvelo ukuze uvule indawo yeveneer entsha. Ngaphezu kwalokho, kuzothathwa isikhunta samazinyo akho.
Ohambweni lwesibili, i-veneer yakho entsha izoboshelwa ezinyo lemvelo. Kunjalo, uzothola isilingo silingana ekuqaleni; ukuze uqiniseke ukuthi izwakala ilungile. Ngalesi sikhathi, ungahlola umbala we-veneer, umumo nomuzwa futhi ucele noma yiziphi izinguquko.
Uzoba nezinyo elibukeka futhi lisebenza njengamazinyo akho emvelo! Izindwangu zamazinyo ziyinketho yabantu abafuna ukuthuthukisa ukubukeka kokumamatheka kwabo. Ngaphezu kwalokho, ama-veneers angasetshenziswa ukulungisa izinhlobo eziningi zezinkinga zezimonyo zamazinyo, okuhlanganisa:
Amazinyo aphelelwe umbala
Amazinyo aqhephukile noma aqhephukile
Amazinyo angaqondile noma avulekile
Ama-Veneers amagobolondo amancane kakhulu e-ceramic (porcelain) aboshwe ebusweni bamazinyo akho. Ziyindlela ehlukile yokuhlanganisa inhlanganisela futhi zingasetshenziswa ukumboza izinyo elilodwa noma amazinyo amaningana. Ama-Veneers angasetshenziswa futhi ukulungisa amazinyo atsheke kancane.
Izindleko ezijwayelekile zezinyosi zamazinyo zingu-R4400 kuya ku-R15000 izinyo ngalinye. Intengo yokugcina izoncika enanini lama-veneers owadingayo kanye nohlobo lwe-veneer material ekhethiwe. Umshwalense wamazinyo awuvamisile ukufaka izinqubo zezimonyo njengama-veneers.
Uma ucabangela ama-veneers amazinyo, thintana nodokotela wamazinyo wezimonyo oqeqeshiwe ukuze nixoxe ngazo zonke izinketho zakho futhi uthole isilinganiso sezindleko. Yebo, uzofuna ukuqinisekisa ukuthi uthola imiphumela engcono kakhulu yokutshala kwakho imali!
Uma unamazinyo angcolile, aqhephukile, noma anegebe, ama-veneers ayisixazululo esihle sokuthola ngokushesha ukumomotheka okusha okuhle.
Omunye wemibuzo evame kakhulu esiyithola ezigulini ukuthi yiluphi uhlobo lwezinto ezisetshenziselwa ama-veneers? I-resin ehlanganisiwe noma i-ceramic?
I-Ceramic veneers yizinto ezinemibala yamazinyo ezimelana namagciwane. Aziqoqi uqweqwe noma amagciwane ngokushesha futhi zilwe nokucasula izinsini noma amazinyo emvelo angomakhelwane. Odokotela bamazinyo bangakwazi futhi ukuwafanisa cishe nanoma yimuphi umbala.
Uma unoqweqwe oluningi lokulahleka kwezinyo, ama-ceramic veneers angase abe inketho enhle kuwe. Lokhu kungenxa yokuthi impahla ye-ceramic ihlala isikhathi eside kunezinye izinto. Kodwa-ke, udokotela wakho wamazinyo uzodinga ukukhipha enye i-koqweqwe lwawo ukuze enze indawo yobumba. Kodwa kubalulekile ukuthi usenoqweqwe olwanele.
Inhlanganisela eyinhlanganisela iyinqubo yamazinyo lapho udokotela wamazinyo ebeka izinto zepulasitiki emazinyweni akho. Lokhu kusetshenziselwa ukulungisa ama-chips, izikhala phakathi kwamazinyo, namabala amazinyo. Ngokungafani nezinye izinqubo zamazinyo, ama-resin veneers ahlanganisiwe angenziwa ngokuvakasha okukodwa. I-Injection Molded Composite Veneers kanye nokubopha kuyindlela yakamuva yokuzuza imiphumela ephindaphindekayo nenhle kakhulu.
Lokhu kuthatha ukuvakasha okumbalwa.
Inhlanganisela ye-resin ehlanganisiwe ingase ingabi yindlela yokwelapha efanele kuwe. Isibonelo, uma ukumamatheka kwakho kugwegwile ngenxa ye-underbite noma i-overbite, lokhu kwelashwa ngeke kukwazi ukukulungisa. Izinto ezihlanganisiwe zisetshenziselwa abantu abanamazinyo anempilo futhi abafuna isisombululo sezimonyo. Sisebenzisa kuphela izinto eziyinhlanganisela ezigulini ezinokulahlekelwa okuncane koqweqwe lwawo.
Ukunakekela ama-veneers akho
Kungakhathaliseki ukuthi unama-ceramic noma ama-resin veneers ahlanganisiwe, kubalulekile ukuwanakekela ngendlela efanele.
Ukuhlanzeka komlomo: Kufanele uxube futhi ushaye ama-veneers akho njengamazinyo akho ajwayelekile. Ukuxubha nokusebenzisa umuthi wokuxubha i-fluoride nsuku zonke kuzowagcina ebukeka kahle.
Ukudla okufanele ukukugweme: Uma udla ukudla okuqinile, njengezaqathi eziluhlaza noma iqhwa, kuhle ukuthi uqale ukuqobe kube izingcezu ezincane. Lokhu kuzokwenza kube lula ukuwadla ngaphandle kokulimaza amazinyo akho. Kungaba ngcono uma nawe uzama ukugwema ukuphuza ikhofi nezinye iziphuzo ezingangcolisa amazinyo akho.
Kubalulekile ukuhlola amazinyo njalo nokuhlanzwa. Ukuhlola kuzosiza ukususa i-plaque isixubho sakho esingakwazi ukulikhipha.
Khumbula ukuthi uzodinga ukushintsha ama-veneers akho ngesikhathi esithile, kungakhathaliseki ukuthi uwanakekela kahle kangakanani. Nokho, ukunakekela amazinyo akho ngenkuthalo nokuya kudokotela wamazinyo njalo kuyowasiza ukuba ahlale isikhathi eside.
Ngezinye izikhathi ama-veneers akuyona inketho engcono kakhulu, futhi ungase udinge umsebenzi owengeziwe, njengama-brace ukulungisa ukuluma kwakho. Okuwukuphela kwendlela yokwazi ngokuqinisekile ukuvakashela uDokotela Wamazinyo Oyizimonyo. Kwa-OptiSmile sihlala sihlola amazinyo akho kanye nempilo yomlomo. Bese, ngemva kokucabangela zonke izindlela zokwelapha ongakhetha kuzo, sizoxoxa nawe ngezinketho zakho.
Bheka eminye yemiphumela emihle esiyizuzile ngama-veneers nezinye izimonyo!
"Umsebenzi osezingeni eliphezulu futhi omuhle kakhulu. UDkt Clifford Yudelman ngokusobala uyayithanda indima yakhe futhi unikeza usizo olukhethekile. Ukubonisana okujulile ngaphambi kokuba ngihlolwe!"
Ayini ama-dental veneers?
Amagobolondo amazinyo (ngezinye izikhathi abizwa ngokuthi ama-porcelain veneers noma ama-dental porcelain laminates) angamagobolondo ama-wafer azacile, enziwe ngokwezifiso ezinto ezinombala wamazinyo aklanyelwe ukuvala ingaphezulu lamazinyo ukuze uthuthukise ukubukeka kwakho.
Izinhlobo ezahlukene ze-veneers.
Funda mayelana nezinhlobo ezahlukahlukene zama-dental veneers nezinto ezisetshenziswa lapho sinquma ukuthi yini elungele iziguli zethu. Noma ngabe udinga ukushintshwa kwezinyo elilodwa noma amazinyo amaningi, kukhona inketho evumelana necala lakho elihlukile. Chofoza ngezansi ukuze ufunde kabanzi.
Ama-veneers wamazinyo e-OptiSmile.
Ama-Veneers ayindlela odokotela bamazinyo abangathuthukisa ngayo ukubukeka kokumamatheka, ikakhulukazi uma amazinyo ebekezelele umonakalo omkhulu noma uma amazinyo akheke ngendlela engavamile. Siqinisekisa ukuthi kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphezulu kuphela.
izindleko ze-dental veneer?
Yini i-Veneers Dental?
Ama-Veneers ayindlela odokotela bamazinyo abangathuthukisa ngayo ukubukeka kokumamatheka, ikakhulukazi uma amazinyo ebekezelele umonakalo omkhulu noma uma amazinyo akheke ngendlela engavamile. I-fitting veneers ingenye yezinsizakalo esizinikezayo kwa-OptiSmile njengengxenye yohlu lwethu olukhulu lokwelashwa kwamazinyo okuthuthukisiwe.
Sihlose ukulondoloza ukumamatheka kwakho kwemvelo okuningi futhi sikunikeze imiphumela yesikhathi eside ngokusebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu nobuchwepheshe bamuva. Isibonelo, sisebenzisa i-Advanced Umklamo we-Digital Smile ubuchwepheshe bokuqinisekisa ukuthi iziguli zethu zithola umbono ongcono kakhulu wokuthi ukumomotheka kwazo okusha kuzobukeka kanjani ngaphambi kokuthi siqale noma yiziphi izinguquko ezibanzi zamazinyo.
I-porcelain eyinhlanganisela kanye neyamazinyo yizinto ezimbili ezivame ukusetshenziswa kakhulu ukwenza ama-veneers. I-veneer eyinhlanganisela ingaboshwa ngokuqondile ezinyo (eyakhelwe phezulu emlonyeni) noma yenziwe ngokungaqondile endaweni yokusebenzela yamazinyo nguchwepheshe wamazinyo futhi iboshwe ezinyoni kusetshenziswa usimende wenhlaka.
I-veneer eyinhlanganisela iphila isikhathi esingaba iminyaka emine. Ngakolunye uhlangothi, i-porcelain veneer ingenziwa kuphela ngokungaqondile. Ukubuyisela okuhlanganisa zonke izinyo ze-coronal (i-Mesial, i-Distal, Facial, Lingual, ne-Occlusal) yindlela umqhele we-veneer ogcwele ochazwa ngayo.
Ngakolunye uhlangothi, i-laminate veneer iwumzimba omncane ovala izinyo kuphela futhi ngokuvamile isetshenziselwa izinjongo zezimonyo. Lezi ngokuvamile zingcono ekusebenzeni nobuhle, okuhlanganisa nokugcinwa kwe-plaque kancane.
Izinhlobo Ezihlukene Zamazinyo Veneers
Enye inzuzo yokuba ne-porcelain veneers amandla azo okubonisa ukukhanya nokufanisa amazinyo emvelo azungezile. Njengenketho yokuqala, lena inketho yakho yekhwalithi. Lawa ama-veneers abukeka engokwemvelo futhi alungisa kahle izinkinga zezimonyo ngaphakathi kokumomotheka kwakho.
Njengoba ihlala isikhathi eside, ihlala isikhathi eside, futhi ngokulungiswa kalula, inganakekelwa futhi ikunikeze ngokumamatheka okumangalisayo iminyaka ezayo.
Ama-veneers ahlanganisiwe angakhiwa ngqo emlonyeni wakho, ama-veneers angahlanganiswa futhi abunjwe ngaphambili kwamazinyo akho ngokuvakasha kodokotela wamazinyo okukodwa.
Lolu hlobo lwe-veneer lunganikeza izinga elilinganayo lokuthuthukiswa kokubukeka njenge-porcelain. Ngaphezu kwalokho, ama-veneers ezinto ezihlanganisiwe avame ukushibhile kune-porcelain, nakuba ehlala isikhathi eside.
Umjovo Olubunjiwe Inhlanganisela Ehlanganisiwe
Uchwepheshe udizayina ngokwedijithali ukuma kwamazinyo kanye nemvelo, futhi umklamo udluliselwa ngokunembile emazinyweni kusetshenziswa isikhunta esakhiwe eduze komklamo futhi sijove into eyinhlanganisela ye-ceramic egelezayo esibunjeni ukuze kugcwaliswe isikhala phakathi kwamazinyo nomklamo omusha. Lokhu kuvumela idizayini enembe ngokuphelele yokuma kwezinyo kanye nokuluma nokunyakaza kwamazinyo ndawonye okuqondisiwe, kusize amazinyo asebenze ndawonye futhi kuvimbele ukuqhekeka noma ukuphuka kwento eyinhlanganisela ngokushesha.
Akukho ukususwa kwesakhiwo sezinyo esinempilo, kodwa ukugcwaliswa okudala kuzodinga ukususwa ukuze kuqinisekiswe isibopho esingcono kakhulu ngqo ezinyoni. Ayibambi yonke indawo yezinyo ngakho-ke, ihlangana nombala wezinyo. Lokhu kusho ukuthi ngezinye izikhathi kungcono ukuthi kwenziwe mhlophe ngaphambili ukuze kuqinisekiswe ukufana kombala okuhle. Izinto ezihlanganisiwe azikwazi ukwenziwa mhlophe ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke kungcono ukufika kumbala ojabule ngawo ngaphambi kokuqala nge-bonding.
Isibopho esiyinhlanganisela esibunjwe ngomjovo sisetshenziselwa ukufaka esikhundleni sezinyo ezinkudlwana eziphukile noma ezigugile noma ukushintsha isimo sezinyo ngaphezu kokugcwaliswa okuyinhlanganisela. Ivamise ukusetshenziselwa iziguli ezincane ezingafisi ukususa izakhiwo zamazinyo ezinempilo ze-porcelain veneers kodwa zingasetshenziswa kunoma ubani.
Izinto eziyinhlanganisela zingashintsha umbala, zicwebe noma zivuze ngokuhamba kwesikhathi - impahla esiyisebenzisayo icwebezelisa kakhulu ngakho ayiguquki kalula njengezinye izinto. Kodwa ukugcinwa njalo kungase kudingeke, ikakhulukazi uma izinto eziningi zisetshenziselwa ukwakha izindawo ezinkulu. Kufanele kugwenywe ezigulini eziququda amazinyo azo njengoba zizocwila noma ziphuke ngaphandle uma zihlale zivikelekile ebusuku ngokwepuleti lokulunywa noma unogada oclusal. Uma kwenzeka noma yikuphi ukuphuka, kungalungiswa ngokungeza izinto eziyinhlanganisela nokusebenzisa amamodeli aklanyelwe ukulungisa eduze kwasekuqaleni ngangokunokwenzeka. Ukuhlanganisa okuhlanganisiwe okubunjwe ngomjovo kungashintshwa kamuva kufakwe ama-veneers noma imiqhele uma kuphakama isidingo.
Ukugcwaliswa okuhlanganisiwe kungenziwa ngesikhathi esisodwa (kuye ngokuthi inani lamazinyo) kodwa kube nokuhlela okuningi.
Ibiza u-R4400 izinyo ngalinye kanye nemali yelebhu yokuklama u-R3500.
"Nakanjani umkhuba ongcono kakhulu okufanele ngiye kuwo kuze kube manje. Ukukhathazeka kwami ​​​​kwamazinyo kuphelile. Indawo ihlelekile, ihlanzekile futhi abasebenzi bayasiza kakhulu!"
Iyini Inqubo Ngama-Dental Veneers?
Ngokuvamile, sicela iziguli zethu ukuthi zifike zizobonana okokuqala futhi zihlole isimo samazinyo azo ukuze zibone ukuthi ama-veneers ayindlela engcono kakhulu yini. Yiqiniso, sasihlala sibheka ukulondoloza amazinyo ngaphambi kokwenza izinguquko ezinkulu.
Njengengxenye yenqubo yethu yokubonisana; sizokwenza ukuhlolwa komlomo, ama-x ray (uma kudingeka), sithathe izithombe zomlomo wakho bese sithatha isithombe somlomo wakho.
Lokhu-ke kuthunyelwa elabhorethri, lapho kwenziwa khona i-wax-up. Lokhu kubuyiselwa ku-OptiSmile, lapho senza khona isikhunta senjoloba, sisebenzisana neklayenti ukuthola amazinyo alo alungile. Le nqubo yaziwa ngokuthi i-Digital Smile Design, futhi ivumela iziguli ukuthi zithole umbono walokho ezingase zikulindele ngaphambi kokuthi siqale noma yimuphi umsebenzi wangempela emazinyweni ngokwawo.
Lokhu kuhilela ukususwa kwe-½ millimeter yoqweqwe lwawo ebusweni bezinyo. Lokhu ngokuvamile kwenziwa ngosizo lwe-anesthetic yendawo ukuze ndikindiki indawo. Enye imodeli izobe isithathwa emlonyeni wakho, ithunyelwe elabhorethri, lapho kuzokwakhiwa khona isethi ephelele yama-veneers.
Ngaphambi kokuthi ama-veneers afakwe usimende emazinyweni akho emvelo, ama-veneers azobekwa phezu kwezinyo ukuqinisekisa ukuthi alingana kahle ngosayizi nombala.
Ama-veneers, kulesi sigaba, asengasikwa, afakwe umbala noma ahlelwe kabusha njengoba kudingeka.
Amazinyo ayahlanzwa bese efakwa ezinyoni ngosimende okhethekile. Lapho izinyo selisesimweni esikahle, usimende ubekwa ophahleni olukhethekile olubangela usimende ukuba uqine, luvale umshini wokuvala indawo ngokuphepha.Isinyathelo sokugcina sihilela ukususwa kwanoma imuphi usimende oweqile phakathi kwamazinyo futhi sizokwenza cela ukuthi ubuye ukuze uzobona ukuthi uqhuba kanjani ama-veneers akho amasha. Sithatha ukunakekela okwengeziwe ukuze siqinisekise ukuthi iziguli zethu zithola isixazululo esingcono kakhulu sezidingo zazo. Uma ungathanda ukuthola ama-veneers, sicela ukhululeke ukuza ukusibona ukuze sixoxe ngenketho yakho. Sinezinhlelo zokusebenza ezithuthukisiwe zamazinyo ukuze siqinisekise ukuthi siyakwazi ukusiza iziguli ngokushesha nangempumelelo ngangokunokwenzeka.
Kungani I-Dental Veneers Yakho Yenze Kwa-OptiSmile?
Nakuba iyisixazululo esihle kakhulu samazinyo, iVeneers ayihlali iyinketho yawo wonke umuntu. Yingakho inqubo yethu yokubonisana ibaluleke kakhulu, njengoba kulapho siqondanisa khona kahle lokho iziguli zethu ezifuna ukukufeza ngezincomo zethu. Digital Smile Design yethu kanye Ubuchwepheshe be-CAD-CAM ziwusizo kakhulu ekushadiseni izinhloso kanye nombono wesiguli sethu nowethu njengodokotela bamazinyo. Sizohlala sibheka ukulondoloza amazinyo ngaphambi kokwenza noma yiziphi izincomo ezizothonya isimo samazinyo akho emvelo.
Ukuqinisekisa ukuthi iziguli zethu zithola eduze nokunakekelwa kwamazinyo okungenabuhlungu kuyingxenye enkulu yezenzo zethu zansuku zonke.
Uma kuziwa ekwelashweni kwamazinyo, ukusika amakhona nokukhetha inketho eshibhile kwesinye isikhathi kungakubiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Izintengo zikadokotela wamazinyo eKapa zingahluka kakhulu. Ukukhetha isixazululo sekhwalithi ephezulu, esithembekile sokwelashwa kwakho kwamazinyo kuhlala kungcono kunokwelashwa okusekelwe kuphela enanini. Ama-veneers ashibhile ngokuvamile angaholela ekunakekeleni okumba eqolo kanye nokuvakasha kodokotela bamazinyo okuqhubekayo, kanye namahloni okubukeka ebonakala kakhudlwana futhi engokwemvelo kancane.
Gwema Ama-Veneers Amazinyo Ashibhile
Ukungaphatheki kahle, okuholela ekuvakasheni okwengeziwe kwamazinyo ngemizamo yokuphinda yakheke kabusha i-veneer. Lokhu kuholela ezindlekweni eziningi zokulungisa.
Ukuthambekela kakhudlwana ekuchipheni nasekulimaleni, okuholele ekulondolozweni noma ekushintsheni
Ukumamatheka okubukeka kwemvelo okuncane, ngenxa yokuthi ikhwalithi ephansi ibonakala kakhulu phakathi kwamazinyo azungezile.
Izindleko zeVeneer Yamazinyo
Uma ufuna amanani entengo ye-veneer yamazinyo, i-OptiSmile izokunikeza umbono wokuthi yini enganquma izindleko zenqubo. Intengo yama-dental veneers ingahluka kuye ngezinto ezimbalwa. Izinto ezingathinta izindleko zingafaka phakathi ukuthi iyiphi into oyikhethayo kuma-veneers akho kanye nendawo yezinyo ethola i-veneer. Isibonelo, ama-composite veneers ayinketho ethengekayo kune-porcelain veneers, futhi ngokuvamile ukufaka i-veneer ezinyo langaphambili kubiza ngaphezu kwezinyo elingabonakali kancane. Ngaphezu kwalokho, indawo lapho okhetha ukuthola khona ukwelashwa izophinde ithinte izindleko zemishini yamazinyo.
Umhlahlandlela Wakho we-Dental veneers amanani
shintsha ukumamatheka kwakho ngama-veneers wamazinyo.
Ama-Veneers ayindlela odokotela bamazinyo abathuthukisa kakhulu ukubukeka kokumamatheka, ikakhulukazi uma amazinyo ekhuthazelele ukulimala okukhulu noma uma amazinyo abunjwe ngokungajwayelekile. Ama-veneers wokulinganisa angenye yezinsizakalo esizinikeza kwa-OptiSmile njengengxenye yohlu lwethu olubanzi lwezindlela zokwelashwa zamazinyo eziphambili.
Kuyinjongo yethu ukugcina ukumamatheka kwakho okungokwemvelo futhi sinikeze nemiphumela yesikhathi eside ngokusebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu nobuchwepheshe besimanje. Isibonelo, sisebenzisa okuthuthukile Umklamo we-Digital Smile ubuchwepheshe bokuqinisekisa ukuthi iziguli zethu zithola umqondo omuhle wokuthi ukumamatheka kwazo okusha kuzobukeka kanjani, ngaphambi kokuba siqale noma yikuphi ukuguqulwa kwamazinyo.
Izinhlobo zama-veneers wamazinyo
Le nto iyathandwa kakhulu ngokudala i-veneers ngenxa yamandla ayo nokuqina kwayo. Uma ama-porcelain veneers enakekelwa kahle ngokunakekelwa kochwepheshe nokunakekelwa okujwayelekile angahlala iminyaka efika kwengama-25. Enye inzuzo yokuba ne-porcelain veneers yikhono layo lokukhombisa ukukhanya nokufanisa amazinyo emvelo azungezile. Njengokukhetha kokuqala lena inketho yakho yekhwalithi.
Ama-veneers ayinhlanganisela angakhiwa ngqo emlonyeni wakho, ngama-veneers akwazi ukuboshwa futhi abunjwe ngaphambili kwamazinyo akho ekuvakasheni kwamazinyo okukodwa. Lolu hlobo lwe-veneer lunganikela ngezinga elilinganayo lokuthuthuka ekubukekeni okufana nokwenziwe ngobumba. Ama-Veneers wezinto ezihlanganisiwe athanda ukushibha kune-porcelain yize njengoba engaqinile kangako
Yini ngempela ama-veneers wamazinyo?
Yini ama-Dental Veneers?
Ama-veneers wamazinyo ahloselwe ukusiza iziguli ezinamazinyo abunjwe kabi kabi, alimele noma akhanyayo. Angamagobolondo enziwe ngokwezifiso enzelwe ukumboza indawo engaphambili yezinyo. Zenzelwe ukubukeka futhi zenze ngendlela efana ncamashi namazinyo emvelo, kepha ngenzuzo eyengeziwe yokuba kwakho nokuzikhethela ngokubukeka kwazo.
Izindwangu zamazinyo zingenziwa nge-porcelain noma i-resin. Ama-resin veneers adinga ukuthi kususwe izinyo elincane njengengxenye yokubekwa, kepha ukuthi iyiphi inketho ekhethiwe izoncika kakhulu esimweni samazinyo akho kanye nomphumela wakho owufisayo.
Kwa-OptiSmile kubalulekile ukuthi sisebenzisane neziguli zethu ngosizo lwezinhlelo ezifakazelwe zokwakhela ukumamatheka okuhle kakhulu. Uma ungaqiniseki ngezinketho zakho, ngena ekubonisaneni kokuqala. Ungamangala ngobuchwepheshe obukhulu obutholakalayo ukusiza ukubuyisela noma nokwenza ngcono ukumamatheka kwakho.
Ngabe ama-veneers akuyona inketho enhle?
Ama-Veneers kungenzeka angabi yisixazululo esihle kunawo wonke umuntu futhi angahle anconywe ezimweni ze:
Ukwakhiwa kwamazinyo okunganele (Alikho koqweqwe lwawo okwanele ukubopha. Ama-Veneers aphumelela kuphela esikhathini eside uma amalungiselelo abo amazinyo engena koqweqwe lwawo njengoba amandla ebhondi kusixhumi esibonakalayo se-tooth-veneer enamandla kakhulu kunalokho obekuzoba khona kumazinyo angaphansi)
Amazinyo abheke kude kakhulu ebusweni (maqondana nezindebe zakho)
Ama-Diastemas amakhulu (izikhala ezinkulu)
Inhlanzeko Yomlomo Engafanele
Amazinyo ahlaselwe kabi
(ukugoqa / ukugaya)
Kodwa-ke, i-OptiSmile inikezela ngezixazululo eziningi, ngakho-ke uma ama-veneers engeyona inketho, kungenzeka kube nezinye izixazululo ezingcono kuwe.
Ngazi kanjani ukuthi ngiyabadinga?
Lokhu kuncike kakhulu esimweni samazinyo akho, kepha lezi ngezinye zezimo lapho ungacabanga ukuthola ukuvezwa:
Amazinyo amnyama, anamabala futhi akhanyayo (ngenxa yama-antibiotic, iminyaka yamazinyo njll)
Ngenxa yezakhiwo ezimangalisayo zezinto zokwakha veneer, ama-veneers angakhiwa ngendlela yokuthi akufihle ngokuphelele ukuphuma kwamazinyo.
Lapho umuntu enamazinyo ambalwa akhanyayo kuphela, ama-veneers angasetshenziswa ukuhlanganisa amazinyo amabi nombala womakhelwane babo abanempilo.
Ama-diastemas (izikhala) phakathi kwamazinyo kulayini wakho wokumamatheka.
Abanye abantu banezikhala ezingajwayelekile phakathi kwamazinyo okwenza ukumamatheka kwabo kubonakale kungabukeki.
Ngama-veneers, ongoti bamazinyo bangagcwalisa lezo zikhala ukwenza amazinyo abukeke ahlukaniswe ngokuphelele ngokwemvelo.
Ama-incisors akheke ngokungajwayelekile (ama-peg laterals)
Amazinyo anokuma okungajwayelekile, agwegwile noma abekwe ngendlela engafanele angafihlwa ngosizo lwe-veneers.
Umphumela uba isethi yamazinyo ngokumangazayo ebukeka imile kahle futhi ihambisana namanye amazinyo.
Abantu abanamazinyo aphukile, aqhephukile noma agugile kakhulu angabafanelekayo bezintambo zamazinyo.
Futhi kwezinye izimo
ama-veneers angasebenza njengenye indlela engcono yeziguli ezingacabanga ngemiqhele yamazinyo.
Ngoba zihlala isikhathi eside, zishibhile futhi azihluphi ngokufana (uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo zamazinyo) ukufaka, zenza ukukhetha okuhle ukubhekana nezinkinga eziningi zamazinyo.
Amazinyo okufakelwa namabhuloho afakwe ezintweni ezifakwayo ngeke zishelele noma zigudle emlonyeni wakho. Lokhu kufanelana okuphephile kusiza amazinyo okufakelwa namabhuloho kanye nemiqhele ebekwe ngaphezulu kokufakwa ukuze izizwe imvelo ngokwengeziwe kunamabhuloho avamile noma amazinyo okufakelwa.
Kwabanye abantu, amabhuloho ajwayelekile namazinyo okufakelwa awanelisi noma engenzeki, ngenxa yamabala abuhlungu, imiphetho engemihle noma ukuvalwa umlomo. Inzuzo yokufakelwa ukuthi awekho amazinyo aseduze okudingeka alungiswe noma agaywe phansi ukuze kubambe izinyo / amazinyo akho amasha esikhundleni. Ukuze uthole okufakelwayo, udinga ukuthi ube nezinsini ezinempilo namathambo anele ukuxhasa okufakelwayo. Kumele futhi uzibophezele ekugcineni lezi zinhlaka ziphilile. Ukuhlanzeka ngomlomo ngokucophelela nokuvakashelwa kwamazinyo njalo kubalulekile ekuphumeleleni kwesikhathi eside kokufakwa kwamazinyo.
Uma ufuna amanani wamazinyo eKapa, ​​i-OptiSmile izokunikeza umbono wokuthi yini enganquma izindleko zenqubo. Intengo yama-veneers wamazinyo ingahluka ngokuya ngezici ezithile. Izici ezingathinta izindleko zingabandakanya ukuthi yiziphi izinto ozikhethela ama-veneers akho nendawo izinyo elithola kuyo i-veneer. Isibonelo, ama-veneers ahlanganisiwe ayindlela engabizi kakhulu kunama-porcelain veneers, futhi imvamisa ukuba ne-veneer esetshenziselwe izinyo langaphambili kubiza ngaphezu kwaleyo yezinyo elingabonakali. Indawo okhetha ukwelashwa kuyoyithinta nezindleko zama-veneer wamazinyo.
Gwema ama-Veneers ashibhile
Uma kukhulunywa ngokwelashwa kwamazinyo, ukusika amakhona nokukhetha inketho eshibhile kwesinye isikhathi kungakubiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Izintengo zamazinyo eKapa zingahluka kakhulu. Kuhlala kuyindlela engcono ukukhetha isisombululo esisezingeni eliphakeme, esithembekile sokwelashwa kwakho kwamazinyo kunokukhetha ukwelashwa okususelwa enanini kuphela. Ama-veneers ashibhile angaholela ekunakekelweni okubizayo nasekuvakasheleni odokotela bamazinyo okuqhubekayo, kanye nasehlazweni lokubonakala kuphawuleka kakhulu futhi kungokwemvelo kancane.
Kungani ama-veneers akho enziwe kwa-OptiSmile
Ama-Veneers, ngenkathi eyisixazululo esimangalisayo samazinyo, akuyona inketho njalo kuwo wonke umuntu. Kungakho inqubo yethu yokubonisana ibaluleke kangaka, ngoba kulapho siqondanisa kahle kahle lokho iziguli zethu ezifuna ukukufeza ngezincomo zethu. Idizayini yethu ye-Digital Smile Design kanye Ubuchwepheshe be-CAD CAM ilusizo olukhulu ekushadeni imigomo nombono wesiguli sethu neyethu njengodokotela bamazinyo. Sizohlala sibheka ukugcina amazinyo ngaphambi kokwenza izincomo ezizothonya isimo samazinyo akho emvelo.
Kodwa-ke, akukhona nje ngaphambi kwezinqubo ukuthi sisebenza ukunakekela okungcono kakhulu. Ukuqinisekisa ukuthi iziguli zithola ukunakekelwa kwamazinyo okungenabuhlungu kuyingxenye enkulu yemikhuba yethu yansuku zonke.
iyini inqubo ngama-veneers wamazinyo?
Ngokuvamile, sicela iziguli zethu ukuthi zize ekubonisaneni kokuqala, zihlole isimo samazinyo azo ukubona ukuthi ama-veneers ayindlela engcono kakhulu yini. Besihlala sibheka ekugcineni amazinyo ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinguquko ezinqala.
Njengengxenye yenqubo yethu yokubonisana, sizohlola ngomlomo, ama-x-ray (uma kudingeka), sithathe izithombe zomlomo wakho bese sithatha isithombe somlomo wakho. Lokhu-ke kuthunyelwa elabhorethri lapho kwenziwa khona i-wax-up. Lokhu kubuyiselwa ku-OptiSmile lapho sakha khona isikhunta senjoloba, sisebenza neklayenti ukuthola amazinyo aso afanele. Le nqubo yaziwa ngokuthi yi-Digital Smile Design futhi inika iziguli ithuba lokuthola umbono wokuthi zingalindelani ngaphambi kokuba siqale noma yimuphi umsebenzi uqobo emazinyweni ngokwawo.
Ngokuvamile, sicela iziguli zethu ukuthi zifike lapho zizobonana khona okokuqala, zihlole isimo samazinyo azo ukuze zibone ukuthi ama-veneers ayindlela engcono kakhulu. Sizohlale sibheka ukulondoloza amazinyo ngaphambi kokwenza noma iyiphi i-c eqinile Njengengxenye yenqubo yethu yokubonisana, sizokwenza ukuhlolwa komlomo, ama-x-ray (uma kudingeka), sithathe izithombe zomlomo wakho bese sithatha isithombe somlomo wakho. Lokhu kuthunyelwa elabhorethri lapho kwenziwa i-wax-up. Lokhu-ke kubuyiselwa ku-OptiSmile lapho sidala khona isikhunta senjoloba, sisebenza neklayenti ukuthola amazinyo alo alungile. Le nqubo yaziwa ngokuthi i-Digital Smile Design futhi inika iziguli ithuba lokuthola umbono walokho ezingase zikulindele ngaphambi kokuthi siqale noma yimuphi umsebenzi wangempela emazinyweni ngokwawo.
Lokhu kuhilela ukususa ½ imilimitha yoqweqwe lwawo ebusweni bezinyo. Lokhu kuvame ukwenziwa ngosizo lwe-anesthetic yendawo ukuze indikishe indawo
Enye imodeli izobe isithathwa ngomlomo wakho, ezothunyelwa elabhorethri lapho kuzokwakhiwa khona isethi ephelele yama-veneers.
Amazinyo ayahlanzwa abese efakwa ezinyo ngosimende okhethekile. Lapho izinyo selisendaweni ekahle, usimende uvezwa osukwini olukhethekile lokukhanya olwenza ukuba usimende uqine, lukhiye umgoqo uvikeleke kahle.
Isinyathelo sokugcina sifaka phakathi ukususwa kwanoma yimuphi usimende oweqile phakathi kwamazinyo futhi sizokucela ukuthi ubuye ukuzobona ukuthi uqhubeka kanjani nama-veneers akho amasha.
Sinakekela kakhulu ukuqinisekisa ukuthi iziguli zethu zithola isisombululo esingcono kakhulu sezidingo zazo. Uma unentshisekelo yokuthola i-veneers, ngakho-ke sicela ukhululeke ukuza uzosibona ukuze sixoxe ngenketho yakho. Sithuthukise ukuhamba kwamazinyo endaweni ukuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukusiza iziguli ngokushesha nangempumelelo ngangokunokwenzeka.
Ukumamatheka Okusha, Okuthuthukisiwe Kuyatholakala. Shintsha Ukumomotheka Kwakho Ngama-Veneers Wamazinyo.
Ngazi kanjani ukuthi ngiyazidinga?
Ngenxa yezakhiwo ezimangalisayo zezinto ezibonakalayo, ama-veneers angakhiwa ngendlela yokuthi akufihle ngokuphelele ukuphuma kwamazinyo. Futhi lapho umuntu enamazinyo ambalwa akhanyayo kuphela, ama-veneers angasetshenziswa ukuhlanganisa amazinyo amabi nombala womakhelwane babo abanempilo
I-Diastemas (izikhala) phakathi kwamazinyo kulayini wakho wokumamatheka
Abanye abantu banezikhala ezingajwayelekile phakathi kwamazinyo okwenza ukumamatheka kwabo kubonakale kungabukeki. Ngama-veneers, ongoti bamazinyo bangagcwalisa lezo zikhala ukwenza amazinyo abukeke ahlukaniswe ngokuphelele ngokwemvelo
Amazinyo anokuma okungajwayelekile, agwegwile noma abekwe ngendlela engafanele angafihlwa ngosizo lwe-veneers. Umphumela uba isethi yamazinyo ngokumangazayo ebukeka imile kahle futhi ihambisana namanye amazinyo
Abantu abanamazinyo aphukile, aqhephukile noma agugile kanzima angabafanelekayo bezintambo zamazinyo
ama-veneers angasebenza njengenye indlela engcono yeziguli ezingacabanga ngemiqhele yamazinyo. Futhi ngenxa yokuthi zihlala isikhathi eside, zishibhile futhi azinabuhlungu ngokufana (uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo zamazinyo) ukufaka, zenza ukukhetha okuhle ukubhekana nezinkinga eziningi zamazinyo.
Ukwakhiwa kwamazinyo okunganele (Ama-koqweqwe awanele okubopha. Ama-Veneers aphumelela kuphela esikhathini eside uma amalungiselelo abo amazinyo engene koqweqwe lwawo njengoba amandla ebhondi kusixhumi esibonakalayo se-tooth-veneer enamandla kakhulu kunalokho obekuzoba khona kumazinyo angaphansi)
Amazinyo abheke kude ebusweni (ngasezindebeni zakho)
Imikhuba engasebenzi (ukugoqa / ukugaya)
Ama-veneers wamazinyo angasetshenziswa njengenye indlela yokuthwala imiqhele ngoba mancane amathuba okuthi akhombise ukushintsha kombala lapho ukubuyiselwa kuhlangana khona nolayini bezinsini.
Kunezinhlobo ezimbili ze-veneers ezisetshenziswa odokotela bamazinyo bethu:
Le nto iyathandwa kakhulu ngokwenza ama-veneers ngenxa yamandla ayo nokuqina kwayo.
Uma ama-porcelain veneers enakekelwa kahle ngokunakekelwa kochwepheshe nokunakekelwa okujwayelekile angahlala iminyaka efika kwengama-25.
Enye inzuzo yokuba ne-porcelain veneers yikhono layo lokukhombisa ukukhanya nokufanisa amazinyo emvelo azungezile.
Ama-veneers ayinhlanganisela angakhiwa ngqo emlonyeni wakho, ngama-veneers akwazi ukuboshwa futhi abunjwe ngaphambili kwamazinyo akho ekuvakasheni kwamazinyo okukodwa.
Lolu hlobo lwe-veneer lunganikela ngezinga elilinganayo lokuthuthuka ekubukekeni okufana nokwenziwe ngobumba.
Ama-Veneers wezinto ezihlanganisiwe athanda ukushibha kune-porcelain yize njengoba engaqinile kangako futhi angadinga ukubuyiselwa kaningi.
Gwema ama-Veneers ashibhile!
Uma kukhulunywa ngokwelashwa kwamazinyo, ukusika amakhona nokukhetha inketho eshibhile kwesinye isikhathi kungakubiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Izintengo zamazinyo eKapa zingahluka kakhulu.
Ukukhetha I-Veneer Eshibhile Kuzoholela Ezindabeni Ezinjengezi:
Ukungaphatheki kahle, okuholela ekuvakasheni okwengeziwe kwamazinyo ngemizamo yokuphinda yakheke kabusha i-veneer
Kuhlala kuyindlela engcono ukukhetha isisombululo esisezingeni eliphakeme, esithembekile sokwelashwa kwakho kwamazinyo kunokukhetha ukwelashwa okususelwa enanini kuphela. Ama-veneers ashibhile angaholela ekunakekelweni okubizayo nasekuvakasheleni odokotela bamazinyo okuqhubekayo, kanye nasehlazweni lokubonakala kuphawuleka kakhulu futhi kungokwemvelo kancane.
Kungani Ama-Veneers Wakho Enze Ku-Optismile
Ama-Veneers, ngenkathi eyisixazululo esimangalisayo samazinyo, akuyona inketho njalo kuwo wonke umuntu. Kungakho inqubo yethu yokubonisana ibaluleke kangaka, ngoba kulapho siqondanisa kahle kahle lokho iziguli zethu ezifuna ukukufeza ngezincomo zethu. Idizayini yethu ye-Digital Smile Design kanye IKHAMU CAD ubuchwepheshe busiza kakhulu ekushadiseni imigomo nombono wesiguli sethu nabethu njengabasebenza ngamazinyo. Sizohlala sibheka ukugcina amazinyo ngaphambi kokwenza noma iziphi izincomo ezizothonya isimo samazinyo akho emvelo.
Ukusetshenziswa kwangempela kwama-veneers kuzolandela kakhulu lezi zinyathelo ezilandelayo:
1. Ukulungiselela - Lokhu kufaka ukususwa kwe-½ millimeter yoqweqwe ebusweni bezinyo. Lokhu kuvame ukwenziwa ngosizo lwe-anesthetic yendawo ukuze indikishe indawo
2. Ukubopha - Ngaphambi kokuthi ama-veneers afakwe usimende emazinyweni akho emvelo, ama-veneers azobekwa phezu kwezinyo ukuqinisekisa ukuthi alingana kahle ngosayizi nombala. Ama-veneers, kulesi sigaba, asengasikwa, afakwe umbala noma ahlelwe kabusha njengoba kudingeka.